ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - သင်၏ Like Power (Fuzhou) Co. , Ltd.
5kw ဒီဇယ် genset
ပင်လယ်ရေ Desalination Genset
Cooling, Heating and Power System ကိုပေါင်းစပ်ပါ
သင်၏ LOWE POWER (FUZHOU) CO ။ , LTD ။ သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ OEM ထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်းအားများကိုတစ်ပေါင်းတည်းစုစည်းထားပြီးမူပိုင်ခွင့် ၃၀ ကျော်နှင့်မီးစက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအထူးပြုသည်။ , အစိတ်အပိုင်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်းအတွက်နှစ်ပေါင်း 30 ကျော်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိပြီး, အရည်အသွေးမြင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များအုပ်စုတစုရှိပြီး, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏စွမ်းရည်ကိုရှိပါတယ်။ အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ 1-5 kw Air-cooled generator နှင့် 10-2000 kw ရေအေးစက်မီးစက်များဖြစ်သည်။ ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နှင့်မီးစက်တပ်ဆင်ခြင်းသည်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သောပြည်တွင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းအင်ဂျင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ခြင်းမှကြီးထွားလာသည်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001-2021 ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့်အညီစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်ထုတ်ကုန်ကိုထုတ်လုပ်ရန်အတွက်တင်းကြပ်စွာထားရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်စာရွက်သတ္တုအပြောင်းအလဲလိုင်း၊ ပက်ဖြန်းထားသောလိုင်း၊ control panel တပ်ဆင်ရေးလိုင်း၊ မီးစက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အမှားပြင်ဆင်ခြင်းအလုပ်ရုံ၊ 2000KW အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခန်းများနှင့်စတုရန်းမီတာ ၃၀၀၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ ရှိ၍ လစဉ်ရေအေးထုတ်စက်များရှိသည်။ ။
5KW-2000KW ဒီဇယ်မီးစက်သည်ပုံသေ၊ စံချိန်စံညွှန်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်တည်ငြိမ်ပြီးစိတ်ချရသောထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုသေချာစေသည်။
ရေအေးဒီဇယ်စက်၏ထူးခြားသောထိပ်တန်းဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းသည် ATS ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအပြည့်အ ၀ တိုးတက်စေရန်နှင့်မီးစက်တပ်ဆင်ခြင်းကိုအချိန်မရွေးစတင်နိုင်သည်။
မင်းကြိုက်တာကိုမင်းကြိုက်တယ် ဖောက်သည်များကိုစျေးသိပ်မကြီးသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများကိုပေးအပ်ရန်အတွက်“ ကောင်းမွန်သောသစ္စာရှိမှုနှင့်ကတိ၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ အရည်အသွေးမြင့်မားမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်တိုးတက်မှု၊ ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု” စီးပွားရေးမူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မည်။
Professional、 Generators、 ထုတ်လုပ်သူ
200 ကျော် emplyee
၁၀ ယောက် R&D အဖွဲ့
1. ထုတ်လုပ်ရေးစက် 74 စုံ
2. မှို & ကိရိယာတန်ဆာပလာထုတ်လုပ်မှု
- မလုပ်မီ၊ တိကျခိုင်မာသည့်အပိုအစိတ်အပိုင်းများ၊ တပ်ဆင်ထားသည့်လိုင်း၊ ဂျင်နက်ကိုမပို့မီဝန်စစ်ဆေးမှု၊ အရည်အချင်းပြည့်မီသောနှုန်း ၉၉.၉% ။
ခွင့်ပြုထားသည့်တီထွင်မှုဆိုင်ရာမူပိုင်ခွင့် ၃၀ ကျော်နှင့်ဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်များ။
- အသံချဲ့စက်၊ တိတ်ဆိတ်စွာသောအခန်းနှင့်သတ္တုပြားတစ်ခုလုံးဆန့်သော Alternator အဖုံးတွင်ထူးခြားသောထည့်ဝင်မှုများ။
- ကုန်ပစ္စည်းများကိုအမြဲတမ်းတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ ဆက်လုပ်!
ဖောက်သည် - အာရုံစူးစိုက်ဝန်ဆောင်မှု 5.
-1 နှစ်အာမခံ, သက်တမ်းကုန်သောအခါ, ကုန်ကျစရိတ်မှာအပိုပစ္စည်းကိုကမ်းလှမ်းနှင့်လည်းလမ်းညွှန်ပြုပြင်။
-Diesel generator set၊ single-cylinder မီးစက်၊ ဂဟေဆော်စက်၊ နောက်တွဲယာဉ်တပ်ဆင်ထားသောမီးမျှော်စင်၊ ဓာတ်ဆီမီးစက်၊ အင်ဗာတာမီးစက်၊ ရေစုပ်စက်…
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုကိုအာမခံသောစက်ရုံ ၇၄ ခုရှိသည့်စက်ရုံများရှိသည်။
စက်ပစ္စည်းများ - ၁
နံပါတ် နာမည် အသေးစိတ် အရေအတွက် (set)
1 CNC ဟိုက်ဒရောလစ်ချိန်သီးညှပ်စက် 4000KN 1
2 ဟိုက်ဒရောလစ်ချိန်သီးညှပ်စက် 2500KN 1
3 သံမဏိပြားညှပ်သူ 2000KN 1
4 စာနယ်ဇင်းပုံဆွဲအောက်ခြေဂီယာနှစ်ဆအရေးယူ 300T 2
5 Double-action ကိုဟိုက်ဒရောလစ်ပုံဆွဲစာနယ်ဇင်း 200T 200T 1
6 လေးကော်လံဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်း 500T 1
7 ဟိုက်ဒရောလစ်စာရွက်သတ္တုပုံဆွဲစာနယ်ဇင်း 1000T 1
8 Hydrolic ပန်းကန်ကွေး 2500 2
9 Hydrolic ပန်းကန်ကွေး 4000 1
10 လာကြတယ်စက် 125T 2
11 လာကြတယ်စက် 100T 1
12 လာကြတယ်စက် 80T 2
13 လာကြတယ်စက် 63T 1
14 လာကြတယ်စက် 40T 3
15 လာကြတယ်စက် 30T 1
16 လာကြတယ်စက် 25T 2
17 လာကြတယ်စက် 10T 3
18 လာကြတယ်စက် 6.3T 1
19 အစက်အပြောက်ဂဟေဆော် 6
20 လှည့်ချုပ်ရိုးဂဟေစက် FZ-160H 2
21 အလယ်အလတ်ကြိမ်နှုန်းအင်ဗာတာအမျိုးအစားအမှတ်ခုံးဂဟေဆော် SMD / SSM 1
22 အာဂွန် arc ဂဟေဆော်စက် အား NBC-270 11
23 SJDQ (စာရေးကိရိယာ Hydraulic Vehicle-Ride Bridge) DCQG8-0.8 1
24 Plasma ဖြတ်စက် 1
25 ကိုယ်ထည်အလိုအလျောက်ဂဟေ 1
26 Semi-automatic သွားတိုက်ထုတ်စက် 1
27 အလိုအလျောက်တိုင်ကီမြင့်ကြိမ်နှုန်းဂဟေ 1
28 လုံးစက်ရုံအလိုအလျောက် 5
29 လေဆာပြုလုပ်ပါ MK3015Q 1
30 Panasonic စက်ရုပ် TA-1800 5
31 Forklift 12
32 ဓာတ်လှေကား 2
အရောင် optional ကို
အပိုပစ္စည်း, အင်ဂျင်, alternator ထုတ်လုပ်ရန်
ဆီဘူး၊ မာဖလာ၊ ပတ္တာ၊ လေစစ်စက်၊
, အိမ်ရာကိုစုဝေး, အင်ဂျင်နှင့် alternator ချိတ်ဆက် chasis မှသူတို့ကို fix
50% ဝန်, 75% ဝန်, 100% ဝန်, 110% ဝန်အပေါင်းတို့နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်များကို
တင် & ဖြန့်ဝေ
ဟိုက်ဒရောလစ် Drawing စာနယ်ဇင်း
ကုန်ကျစရိတ် ၃၀% လျှော့စျေး、 Enviormenal、 မြင့်မားသောတိကျ、 ကောင်းမွန်သောအပူလေဝင်လေထွက် ilation ထုတ်လုပ်မှုအမြန်နှုန်း
ဟိုက်ဒရောလစ် leveling စက်
（electrostatic မှုန်ရေမွှား coating
2、 Electrostatic ရေမှုန်ရေမွှား
“ သိပ္ပံပညာသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးကြီးသောအင်အားတစ်ခုဖြစ်သည်။ “ အသစ်နှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်း” ဟူသောအသုံးအနှုန်းသည်လုပ်ငန်း၏အဓိကလွတ်လပ်သောအသိဥာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။
တယ်လီ0086- (0) 591-83431596
Land 3, Industrial Park, Huanxi Town, Jin'an ခရိုင်၊ Fuzhou, Fujian, China